जागिर गुम्यो ? अब वर्किङ भिसा के हुन्छ त ? | Nepali In Japan
Sunday, June 13जापानबारे सबै कुरा
जागिर गुम्यो ? अब वर्किङ भिसा के हुन्छ त ?
May 7, 2018 April 29, 2021
पछिल्ला केही वर्षहरुमा जापानमा विदेशी कामदारको सङ्ख्यामा वृद्घि भइरहेको छ । त्यो संख्या नेपालीहरुको हकमा पनि बढेको छ । जापानमा आउने धेरै नेपालीहरुमध्ये कामदारको स्टाटसमा जापानमा बसोबास गर्नेहरुको संख्या धेरै छ । यदि तपाईले गर्दै गरेको जागिर स्थायी हो भने यो जानकारी तपाईका लागि होइन । अस्थायी वा सिमीत समयावधिका लागि तोकिएको जागिर गर्दै हुनुहुन्छ र कुनै बेला तपाइ वेरोजगार हुनु भयो भने तपाइको भिसाको स्तर के हन्छ भन्ने कुराको जानकारी आज यहाँ दिन लागिएको छ ।
वर्किङ भिसा के हो ?
जापानमा विदेशी नागरिकहरुलाई बस्नका लागि जापानी सरकारले २७ ओटा भिन्दा भिन्दा भिसा दिने गरेको छ । २७ ओटा भिसा मध्ये प्रोफेशर, कलाकालार, कानून/एकाउण्टिङ सेवा र मेडिकल सेवाजस्ता १७ ओटा भिसालाई वर्किङ भिसा भनिन्छ । वर्किङ भिसा भएका विदेशी नागरिकलाई विशिष्ट क्षेत्रमा काम गर्न र जापानी तलव प्रकृयामा रहेर आम्दानी गर्ने अनुमति हुन्छ । जापानमा कुशल श्रमिक (Skilled Labor) र इञ्जिनीयर/मानवीकि/अन्तरराष्ट्रिय सेवा क्षेत्र (Engineer/Humanities/Intl.Services) मा जागिरको माग अन्य भन्दा बढी छ । यद्यपि यस्ता भिसा भएकाहरुलाई उनीहरुको भिसा स्टेटसमा अनुमति नभएका क्षेत्रमा भने काम गर्ने अनुमति हुँदैन ।
जागिर गुमाएका वर्किङ भिसा बाहकले के गर्ने ?
सन् २०१२ को जुलाइ महिनामा जारी भएको नयाँ आवासिय व्यवस्थापन प्रणालीअन्तर्गत वर्किङ भिसा भएकाहरुले आफ्नो जागिर गुमेपछि त्यहाँको अध्यागमन विभागमा जानकारी दिन आवश्यक छ । ३ महिनाभित्र अर्को जागिर भेटिएको अवस्थामा भिसाको स्टेटस त्यसको म्याद नसकिएसम्म उहि रहन्छ । तर यदि नयाँ जागिर खोज्न कुनै प्रयास गरिएन र ३ महीनासम्म पनि वेरोजगार नै रहेको अवस्थामा भने भिसा रद्ध हुन सक्छ । त्यस्तै भिसाको म्याद सकुञ्जेलसम्म पनि वेरोजगार नै रहेको अवस्थामा भिसा नवीकरण गर्न एकदमै गाह्रो हुन्छ ।
पार्टटाइम जागिर खाँदा विचार पुर्याउनुपर्छ
आफ्नो जागिर छुटेपछि र अर्को जागिर खोज्ने बेलामा आफ्नो भिसामा अनुमति प्राप्तभन्दा बाहेकको जागिर खान नपाइने कुरा विचार पुर्याउनुपर्छ । भिसामा अनुमति पाएको जागिरको भन्दा अर्को क्षेत्र रोज्नुपर्दा अनुमति (“Permission to engage in an activity other than that permitted under the resident status”) का लागि आवेदन दिनुपर्छ । यति मात्र नभई आफूले जागिरको क्षेत्र के कारणले परिवर्तन गर्न लागेको हो सो पनि उल्लेख गर्नुपर्छ ।
नयाँ जागिर पाएपछि
नयाँ जागिर पाएपछि पनि केही प्रकृयाहरु छन् जसलाई पुरा गर्न आवश्यक छ । यदि तपाइको नयाँ जागिर पहिलाकै जस्तो हो र भिसाको म्याद सकिन पनि धेरै समय बाँकी छ भने ‘सर्टिफिकेट अफ अथोराइज्ड एम्प्लोयमेण्ट’ (“certificate of authorized employment”) का लागि आवेदन दिनु उपयुक्त हुन्छ । जापानको न्याय मन्त्रालयले जारी गर्ने यो प्रमाणपत्र सो क्षेत्रमा काम गर्नका लागि दिइएको कानूनी मान्यता हो । यो प्रमाणपत्र पाउन नयाँ रोजगारदाताले तपाइको भिसा स्टेटसमा तोकिएको मापदण्ड पुरा गर्छ वा गर्दैन भन्ने कुराको जानकारी गराउनु पर्छ । यसले तपाईलाई पनि नयाँ जागिरमा काम गर्न आफूलाई अनुमति भए नभएको बारे पनि जानकारी हासिल गर्न सजिलो हुन्छ । यसले भविश्यमा अनुमति नभएका क्षेत्रमा काम गर्दा भिसा नवीकरण गर्दा हुने झन्झट कम गर्छ । धेरै नेपालीहरुको हकमा भिसामा तोकिएको काम र कम्पनीको कामको प्रकृति नमिल्दा भिसा एक्सटेन्सन नभएका उदाहरणहरु पनि छन् । एक कम्पनी छाडेर अर्को कम्पनी जाँदा १४ दिनभित्र अध्यागमन कार्यालयमा जानकारी गराइसक्नुपर्ने नियम छ ।
यदि तपाइको नयाँ जागिर पहिलाकै जस्तो हो र भिसाको म्याद सकिने समय थोरै बाँकी छ भने नयाँ जागिर शुरु गर्नुअगाडि वा शुरु गरिसकेपछि ‘बसाइको अवधि लम्ब्याउने अनुमति’ (Extention of Period of Stay) का लागि आवेदन दिनुपर्छ ।
त्यस्तै यदि तपाइको नयाँ जागिरको क्षेत्र पहिलाको भन्दा फरक हो भने नयाँ जागिरको शुरुआत गर्नुअघि ‘स्टेटस परिवर्तनको अनुमति’ (Permission to change the status of residence) का लागि आवेदन दिनुपर्छ । यसका लागि तपाइको नयाँ जागिर र स्टेटस अफ रेसिडेन्सका मापदण्ड एक अर्कासँग मेल खानुपर्ने हुनाले आफूले जागिर खान लागेको कम्पनी र पदका बारेमा पूर्व अनुसन्धान आवश्यक छ । अन्य केही मामिलामा आफूले जागिर परिवर्तन गरेकोबारे अध्यागमन विभागमा जानकारी गराउनुपर्छ ।
सबै प्रकारका वर्किङ भिसाहरु तोकिएको क्षेत्रमा जागिर खानका लागि जारी गरिएको हुन्छ । यसैकारण आफ्नो जागिर गुमेपछि वर्किङ भिसा भएकाहरुले तुरुन्तै अर्को जागिर खोजिहाल्नुपर्छ । भिसा छंदैछ, काम पछि खोजौंला भनेर बस्दा भिसामा समस्या आउनसक्छ ।
यो जानकारी तपाईलाई कस्तो लाग्यो ? उपयोगी लागेमा सेयर गर्न नबिर्सनुहोला है । तपाईका केही अनुभव छन् भने तल कमेन्टमा लेख्न सक्नुहुन्छ ।
काम गरेको तलब नपाए के गर्ने ?
जापानको भिसा रिन्यु कसरी गर्ने ?
यस्तो हुन्छ विद्यार्थी भिसाबाट बर्किङ भिसा परिवर्तन गर्ने प्रकृया
Posted in कानुनी कुरा
Prevसमयमै होकेन नतिरे के हुन्छ ?
Nextजापानको ट्रेन सिस्टम बुझ्नुभएको छैन ? यसो गर्नुहोस्
जापानको पिआर अधबैंशे पोइ र कलिली श्रीमति
रिरेकिस्यो भर्दा प्रयोग हुने शब्दहरुको नेपाली अर्थ
यस्तो हुन्छ जापानको भिसा एक्सटेन्सन गर्ने प्रकृया र आवश्यक कागजातहरु
यि हुन जापानमा अधिक प्रयोग हुने ‘वासेई एइगो’
यस्तो हुनेछ जापानमा कोरोनाभाइरस विरोधी भ्याक्सिन लगाउने प्रक्रिया
January 6, 2021 March 16, 2021
जापानमा बिजुलीका पोलहरु जमिनमुनि किन गाडिएको छैन ?
December 10, 2020 March 14, 2021
अनलाइनमै जापानी भाषाको कोर्ष कसरी पढ्ने ?
November 1, 2020 March 16, 2021
किन जोडिदैंछ ड्राइभिङ लाइसेन्सलार्ई माइनम्बर कार्डसँग ?
October 30, 2020 January 9, 2021
जापानीमा टाइप गर्दा समय बचाउने तरिका
डाक्टरलाई आफूलाई भइरहेको दुःखाईबारे कसरी बताउने ?